Tsy nivarotra tany tamin’ny vahiny izany ny fanjakana, hoy kosa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fanehoan-kevitra nataony omaly tamin’ny fanokafana ny Foara Iraisam-pirenena momba ny fambolena teny Forello Tanjombato. Nolazainy koa fa hohamoraina ny fahazoan’ny tantsaha tany mba hampiroboroboana ny fambolena. Nasiany teny ny ezaka ataon’ny fanjakana amin’ny fanatsarana ireo lalàna isan-karazany momba izany, indrindra ny politikan’ny fananan-tany, izay nohatsaraina hatramin’ny taona 2015. Maro ny mankasitraka ny fanehoan-kevitra ary tehaka mirefodrefodrefotra no azon’ny filoha. Ny mampalahelo, dia ny mifanohitra amin’izay no tena iainan’ny Malagasy. Ny eo am-pelatanany aza bodoina. Tsy fitia te hanakiana fa tsy tambo isaina ny fibodoana tany ataon’ny vahiny eto amintsika, raha tsy hilaza afa tsy ny any Moramanga. Tany 130 ha, efa nivelomana hatramin ny taona 1966 ary vita « reconnaissance » tamin’ny 2006 no nahavitan’ny vazaha baorina teny ambony latabatra. Misy ny firaisana tsikombakomba amina tompon’andraikitra ambony sy manampahefana matoa tanteraka. Ny toe-javatra tahaka ireny no ilana ny fijoroan’ny filoha sy ny fanjakana tarihiny, mba hanehoany fiarovana ny Malagasy. Toa tsy mba misoka-bava manoloana ireny anefa ny tenany. Miandry izay tena fandraisana andraikitra ataon’ny Filoha ny rehetra.